ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါ - ဝီကီပီးဒီးယား
Examples of invertebrates from different phyla; clockwise from top-left: Chrysaora fuscescens (a cnidarian), Drosophila melanogaster (a arthropod), Caribbean reef squid (a mollusk), and Hirudo medicinalis (a annelid).
ကျောရိုးရှိသတ္တဝါ မျိုးပေါင်းစုခွဲထဲတွင်မပါဝင်သော အောက်ပါကဲ့သို့ ကျန်တိရစ္ဆာန်များအားလုံး :
ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါ (Invertebrates) ဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ကျောရိုးဆစ်တွဲ (Vertebral Column) မပါရှိသော (သို့) အရိုးပျော့ချောင်း (Notochord) မှ ကျောရိုးဆစ်တွဲ အဖြစ်သို့ ဖွံဖြိုးပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိသည့် တိရစ္ဆာန်များအားလုံးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောရိုးဆစ်တွဲ (Vertebral Column) ဆိုသည်မှာ လူအများစု သုံးနှုန်းလေ့ရှိသည် ကျောရိုးမကြီး (သို့) ငါးများ၏ ကျောရိုးဆူးတောင် အား ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကျောရိုးမဲ့ သတ္တဝါ အစုအဖွဲ့တွင် မျိုးပေါင်းစုအခွဲဖြစ်သော ကျောရိုးရှိ သတ္တဝါ (Vertebrata) မှလွဲ၍ ကျန်တိရစ္ဆာန် အားလုံးပါဝင်သည်။ လူအများစုနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိသော ကျောရိုးမဲ့ သတ္တဝါများမှာ အာ့သရိုပေါ့ဒ် အုပ်စုဝင်များ (အင်းဆက်များ ၊ ပင့်ကူများ၊ ခရက်စတေးရှန်းများ နှင့် မီရီယာပေါ့ဒ်များ)၊ ခရုမျိုးအုပ်စုဝင်များ ( ချီတွန်များ၊ ခရုများ၊ ကမာများ၊ ပြည်ကြီးငါးများ နှင့် ရေဘဝဲများ) အန္နဲလစ်ဒ် အုပ်စုဝင်များ (တီကောင်များနှင့် ကျွတ်များ) နှင့် နိုက်ဒဲရီးယား အုပ်စုဝင်များ (ဟိုင်ဒြာများ၊ ရေခူများ၊ ပင်လယ် အနီမိုနီ နှင့် သန္တာကောင်များ) စသည်တို့ပါဝင်သည်။
တိရစ္ဆာန် မျိုးစိတ် အများစုသည် ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါ မျိုးစိတ်များဖြစ်သည် (ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည့် ခန့်မှန်း အရေအတွက် ကိန်းဂဏန်းမှာ မျိုးစိတ် စုစုပေါင်း အရေအတွက်၏ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိသည်ဟု သိရသည်)။ ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါ တက်ဆာ(Taxa) တစ်ခုတွင် ပါဝင်သော မျိုးစိတ် အရေအတွက်နှင့် မျိုးကွဲအရေအတွက် နှစ်ခုလုံးသည် ကျောရိုးရှိသတ္တဝါ မျိုးပေါင်းစုခွဲ တစ်ခု၌ ပါဝင်သည့် အရေအတွက်ထက်ပင် ပိုများသည်ဟု ဆိုသည်။ ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများ၏ ကိုယ်ခန္ဓာအရွယ်အစားသည် ၅၀ မိုက္ကရို (မြူ) မီတာ (၀.၀၀၂ လက်မ) အရွယ် ရိုတစ်ဖါစ်  ဆိုသော အဏုဇီဝ မှသည် ၁၀ မီတာခန့် (၃၀~၃၃ လက်မ)အရွယ် ဧရာမ ပြည်ကြီးငါး အထိ အရွယ်အစားအမျိုးစုံကွဲပြားသည်။
ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါဟူ၍ပင် သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေကြသော တူနီကတ္တာ (Tunicata) နှင့် ဆက်ဖလိုကော်ဒတ္တာ (Cephalochordata) ကဲ့သို့ အချို့သောတိရစ္ဆာန်များမှာ အခြားသော ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများထက် ကျောရိုးရှိ သတ္တဝါများနှင့် အမျိုးအနွယ်ပို၍နီးစပ်ကြသည်။ ထိုအချက်သည် ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများအား Paraphyletic အဖွဲ့များ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းစကားလုံး အသုံးအနှုန်းသည် Taxonomy တွင် အနည်းငယ်အဓိပ္ပာယ်ပိုသည်။
ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါဟူသောစကားလုံးသည် လက်တင်ဘာသာစကား invertebra မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အဓိပ္ပါယ်မှာ ယျေဘူယျအားဖြင့် အဆစ်တစ်ခုမရှိခြင်း ဖြစ်ပြီး ကျောရိုးဆစ်တွဲ (သို့) ကျောရိုးဆစ်မရှိခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
ရှင်သန်နေဆဲ မျိုးစိတ် အရေအတွက်[ပြင်ဆင်ရန်]
ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများထဲ၌ မျိုးစိတ် အရေအတွက် အများဆုံးမှာ အင်းဆက်များဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းခဲ့သည့် IUCN ၏ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသော မျိုးစိတ်များ၏ အနီရောင်စာရင်းတွင် ဖော်ပြထားသော ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါ အဓိကအုပ်စုများအတွက် မျိုးစိတ် အရေအတွက်စာရင်းအား အောက်ပါဇယားတွင် စာရင်းပြုစုထားပါသည်။
အင်းဆက်များ Insecta ၁,၀၀၀,၀၀၀
ပင့်ကူ၊ ကင်းမြီးကောက်၊ ကင်းခြေများ Arachnida ၁၀၂,၂၄၈
ကျိချွဲသတ္တဝါ Mollusca ၈၅,၀၀၀
အခွံမာ ရေသတ္တဝါများ Crustacea ၄၇,၀၀၀
သန္တာကောင် Anthozoa ၂,၁၇၅
ကတ္တီပါ ပိုးများ Onychophora ၁၆၅
မြင်းခွာကဏန်း Xiphosura ၄
- - ၆၈,၆၅၈
စုစုပေါင်း ~ ၁,၃၀၀,၀၀၀
IUCN ၏ ခန့်မှန်းချက်တွင် ဖော်ပြထားမှုမှာ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါ မျိုးစိတ်အရေအတွက်သည် ၆၆,၁၇၈ ခုဖြစ်သည်။ ထိုအရေအတွက်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လေ့လာတွေ့ရှိဖော်ပြထားပြီး တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်အားလုံး၏ ၉၅% ကျော်သည် ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုနေခြင်းဖြစ်သည်။
↑ Richards, O. W.; Davies, R.G. (1977)။ Imms' General Textbook of Entomology: Volume 1: Structure, Physiology and Development Volume 2: Classification and Biology။ Berlin: Springer။ ISBN 978-0-412-61390-6။
↑ Howey၊ Richard L. (1999)။ Welcome to the Wonderfully Weird World of Rotifers။ Micscape Magazine။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ The World Conservation Union. 2014. IUCN Red List of Threatened Species, 2014.3. Summary Statistics for Globally Threatened Species. Table 1: Numbers of threatened species by major groups of organisms (1996–2014).
ဤ တိရစ္ဆာန်နှင့် ဆက်နွယ်သော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါ&oldid=721478" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။